Halkee iyo Goorma ayay ku kulmaan VIP-yada ugu sarreeya Suuqa Socdaalka Adduunka?
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Halkee iyo Goorma ayay ku kulmaan VIP-yada ugu sarreeya Suuqa Socdaalka Adduunka?
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Warka Safarka Safarka • Wararka UK • Wtn
Cocktail-ka WTTC ee Chesterfield Mayfair ee London waa dhacdo gaar ah oo loogu talagalay VIP-yada ugu sarreeya warshadaha socdaalka iyo dalxiiska caalamiga ah. Caawa, 2-da Noofambar waxay ahayd markii ugu horreysay ee hoggaamiyeyaashu ay awood u yeeshaan inay si shaqsi ah isu arkaan - waana la soo buuxiyay.
Hoteelka Chesterfield Mayfair ee London wuxuu ahaa goobta in ka badan 20 sano ay madaxda dalxiisku ku kulmaan WTTC Cocktail fiidkii labaad ee Suuqa Socdaalka Adduunka.
Caawa waxay ahayd habeenkii, 2 sano ka dib, markii madaxda dalxiisku ay awoodeen inay isu yimaadaan, oo ay iloobaan indho-shareerka, oo ay qabsadaan.
UNWTO waxaa matashay Anita Mendiratta. Xoghayihii guud waa ka maqnaa.
In ka badan 20 sano, saaxiibtinimada iyo ganacsigu waxay ka bilaabantay ama ka sii socotay huteelka 5-xiddig ee u dhow Greenfield ee London, Chesterfield Mayfair Hotel.
The Golaha Safarka iyo Dalxiiska AdduunkaSannad kasta inta lagu jiro Suuqa Socdaalka Adduunka waxay ku casuuntaa xubnaha, wasiirrada, iyo VIP-da kale ee hudheelka si ay u helaan khamri, champagne, iyo cunto fudud.
Waa mid ka mid ah dhacdooyinka aadka loo dalbado ee dhinac socda Suuqa Socdaalka Adduunka.
Dhacdadan caawa waxay fursad weyn u ahayd madaxa cusub ee WTTC Julia Simpson, si uu ula hadlo xubnaha, wasiirada, iyo martida. Waxay qabatay hoggaanka ururkan oo matalaya 200 oo ganacsiyada ugu waaweyn ee socdaalka iyo dalxiiska.
Wasiirada dalxiiska ee Jordan, Barbados, Jamaica, iyo Filibiin ayaa ka mid ahaa martida.
Filibiin waxay noqon doontaa marti gelinta Shirwaynaha soo socda ee WTTC 2022.
Juergen Steinmetz, daabacaha eTurboNews iyo Gudoomiyaha WTN, ayaa ka qayb galay xafladan, waxaanu ka soo qaatay muuqaalkan kooban:
Dalxiiska wuxuu ku saabsan yahay dadka, laakiin sidoo kale wuxuu ku saabsan yahay ganacsiga - waxayna ku tusaysaa is biirsaday WTTC.
Hay'adaha Fai Mission wuxuu leeyahay,
Nofeembar 3, 2021 at 10: 41
Waxaan sii wadaa in aan maqlo in alaab-qeybiyeyaashu ay ka careysan yihiin codsiyada la-taliyayaasha ee "VIP" macaamiishooda iyaga oo aan helin wax gaar ah oo ku saabsan waxa dhab ahaantii samayn lahaa. Taxanaha Bandhigga Safarka & Adventure waa fursad la tijaabiyay oo aad loo tixgaliyo fursad suuqgeyn socdaal. Kor u qaad astaantaada bandhigyadayada safarka!